Dailyhunt အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
18.5.3 for Android
၏ဖော်ပြချက် Dailyhunt - Latest Local & National News, Videos
DailyHunt, "India" News India "News & B> India တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဒေသခံ, အမျိုးသားရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ, နိုင်ငံရေး, ပုကရက်, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အခြားအရာများ။
News, Videos & Videos & Vides Cards ဟိန္ဒူ, တမီးလ်, မလေးရှား, အင်္ဂလိပ်, အင်္ဂလိပ်, မာရ်နတ်, ဘင်္ဂလား, Odia, Odia, Odia, Odia, Odijabi, Odijabi, Odijapi, Odjabi, Odjabi
• Live Videos အသစ်များ
Live ဗီဒီယိုများ, ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း
•အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဆက်နွယ်မှု, အချိန်ဇယား, ဆုတံဆိပ်များ, အချိန်များ, ကွင်းနှင့်ဆိုင်ခန်းများ, နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ, အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ, ထိပ်တန်းပုံပြင်များ, ထိပ်တန်းစတုရန်းနှင့်အင်္ဂလန်မှ T21 Cricket League မှ T21 Cricket League သို့ Cricket ကိုနေ့စဉ်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သည်။
•ပွဲစဉ်၏တိုက်ရိုက်ရမှတ်များ, ဂိုးသွင်းချက်များ, ဂိုးသွင်းခြင်း, ဂိုးသွင်းမှတ်ချက်ပေးရန်။ •ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ယူဆချက်, အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, အတိမ်အနက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, R>
တရားဝင်အစိုးရအရင်းအမြစ်များမှ Covid 19 Pandid 19 Pandid (B) ရှိသတင်းများနှင့်မွမ်းမံချက်များကိုလိုက်နာပါ။ SailyHunt နှင့်အတူလုံခြုံစွာနေပါ။
•ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း, အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှင့်ဆေးရုံ / စင်တာစာရင်း - ပြည်နယ်နှင့်ခရိုင်အဆင့်
•လုယက်မှုများ, ခိုးမှုနှင့်မတော်တဆမှုများနှင့်အတူယနေ့အထိနေပါ။ •သင်၏မြို့ရှိအလုပ်အကိုင်များနှင့်နေရာလွတ်များ••အများပြည်သူဆိုင်ရာပြ issues နာများ ရေပြတ်လပ်မှု, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု, ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု, Daffs နှင့် Daily Market / Mandi Rates •သင့်ရပ်ကွက်ရှိပွဲတော်များ, Melas နှင့်ဘာသာရေးပွဲများ
TRESS / TV Channels •အစိုးရ / အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေး
•ပုကရက်, ဖျော်ဖြေရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလား။ ဆောင်းပါးကိုမျှဝေရန် Repost ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏စိတ်ထဲတွင်ရှိသောအရာများကိုအခြားသူများအားအသိပေးပါ။ သင်၏ဓါတ်ပုံများ, MeMes, News ဆောင်းပါးများ, ဗီဒီယိုနှင့်လင့်များကိုမျှဝေပါ။ Go Big Go Go!
The DailyHunt ၏အခြားလက္ခဏာများ -
• Media Partners 2600 မှအိန္ဒိယဘာသာစကား 14 ခုတွင်အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများကိုရယူပါ။ NEWS, Videos & Photos
•အိန္ဒိယကျေးရွာများ, မြို့များနှင့်ခရိုင်များမှ PIN Code Level ဒေသများ, မြို့များနှင့်ခရိုင်များထံမှ PIN Code Level ဒေသသတင်းများရယူပါ။ • World News, ဖျော်ဖြေရေးသတင်းများ, တီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများ, , အလုပ်အကိုင်သတင်းများ, ကာကွယ်ရေး, သိုလှောင်မှုအသစ်များနှင့်ပိုမိုများပြားလာသည်။ •သင်အကြိုက်ဆုံးသတင်းစာများကိုလိုက်နာပါ။ •နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်သြဇာသက်ရောက်သူများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများ, ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ ကြိုက်နှစ်သက် / ရှယ်ယာနှင့်မှတ်ချက်များကိုကြိုက်
B> Watch Videos
Live Hindustan, Aaj Tak, Amar ujala, amar ujala, amar ujala, jagrran, Punjab Kesari
Tamil - Dutamalar, Dinamani, Dynamani, Punhialam, Asalhietur, Nakkheheran - Mangalam, Asianet, Madhyamam, Kair NewsHabhimani
Kannada - Prajavani, Kannada Dunia, Kannada, unavarnannaews, suvarnannaews, suvarnanathi, zee newsughty, zee newsoto Hindustan Times, IndiaToday, အိန္ဒိယ Express, The New အိန္ဒိယ Express, Deccan Chronicle, Deccan Herald သတင်းစာက The Telegraph, ဘီဘီစီ, News18, •သီ
အဆိုပါပုံနှိပ်ပါ - Lokmat, Loksatta, Saamana, Pudhari, Majha စက္ကူ, Dainik Prabhat, Sakal Saam TV, Majha စက္ကူ, ABP Majha, Tarun Bharikat
Eatla, BBC BABLA, KolbANA 24 * 7, sangbad Pratidin, ABP Andaand Pratidin, at18 Bangla
Sandesh, GSTV, Vishwa Gujarat, Day Day-Gujarati, ABP asita, TV9 Gujarati
Odia: Odia သတင်းထောက်, Odia Pera, Odia Pai, Kanaki, Odia TV, Punjabi • Punjabi Ajit Jalandhar, Jagbana ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ, Punjab Post, Daily Nawan Zamana, Abpsanjha
မည်သည့်ပြ issues နာများအကြောင်းကိုမဆိုသတင်းပို့ပါ အီးသည်နေ့စဉ်တိုးတက်လာနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်၏ [email protected]
ဘာအသစ်လဲ Dailyhunt - Latest Local & National News, Videos 18.5.3
Dailyhunt - Latest Local & National News, Videos |dailyhunt app | dailyhunt news | daily hunt vedios
आज की सबसे बड़ी ख़बरें | Today latest top 20 news | news channel | News | Breaking news | Taaja khabar
How to edit news ? Daily Hunt, One India की तरह ख़बरे, न्यूज़ कैसे बनायें ? | Full Tutorial (Hindi)
Daily Hunt App Kaise Use Kare? Dailyhunt Local Language News App (in Hindi)
Dailyhunt - Local & National News, Videos, Cricket 18.4.7
Dailyhunt - Local & National News, Videos, Cricket 18.2.15
ဤ အက်ပ်သည် အထောက် အကူပြူးသည်